Madaxweynaha Mustaqbalka Oo Baaq U Diray M/weyne Siilaanyo, Sheegayna In Dalku U Baahan Yahay Dhiig Cusub Oo Xaqiijiya Riyada Umadda | FooreNews
Home wararka Madaxweynaha Mustaqbalka Oo Baaq U Diray M/weyne Siilaanyo, Sheegayna In Dalku U Baahan Yahay Dhiig Cusub Oo Xaqiijiya Riyada Umadda
Madaxweynaha Mustaqbalka Oo Baaq U Diray M/weyne Siilaanyo, Sheegayna In Dalku U Baahan Yahay Dhiig Cusub Oo Xaqiijiya Riyada Umadda
“Saddexda Xisbi Qaran Hore Ayaan Uga Maahmaahay Oo Aan Ka Idhi, Xeradaadu…”
Hargeysa (Foore)- Siyaasi Cabdiqaadir Cali Obsiiye oo loo yaqaano Madaxweynaha Mustaqbalka ahna siyaasi Musharrax Madax bannaan ayaa waraysi gaar ah oo uu shalay siiyey Telefishanka Bulsho TV waxa uu si gaar ah uga hadlay xaaladda guud ee dalku marayo, baaq uu u diray Madaxweyne Siilaanyo iyo Golaha Wakiilada iyo waliba aragtidiisa la xidhiidha xaaladda siyaasadeed ee xisbiga WADDANI iyo waxqabadka xukuumadda isaga oo dhinaca kalena baaq nabadeed ka diray beelaha walaalah ah ee ku diriray dhawaan Gobolka Sanaag ee Jamhuuriyadda Somaliland.
Siyaasi Cabdiqaadir Cali Obsiiye (Madaxweynaha Mustaqbalka) oo arrimahaa ka hadlayaa waxa uu yidhi: “Ugu Horrayn Waxaan baaq nabadeed halkan uga dirayaa beelaha walaalaha ah ee dhawaan ku diriray meelo ka mid ah Somaliland oo aan leeyahay walaalayaal colaadda iska daaya oo halaga waantoobo oo nabad gelyada aan ka shaqayno, oo caqligu ha inna shaqeeyo. Anoo jaaniskan uga faa’iidaysanaya, waayo anuu nin nabadeed baan ahay marka horeba. Ta kale ee aan doonayo in aan maanta halkan jaaniska uga faa’iidaystaa waxa weeyi abaaraha dalkeena ka taagan meelo badan oo ka mid ah oo aan halkan baaq uga diro xukuumadda iyo ganacsatada labadaba oo aan leeyahay walaalayaal waxaa la idiinka baahan yahay in aad si degdeg ah wax ula gaadhaan meelaha aadka u sii baahan ee ka mid ah dhulk aabaaruhu saameeyeen. Waxaanan leeyahay xukuumadda iyo inta wax haysata ee Ilaahay hantida siiyay, walaalayaal aan u midawno dadkeena jilicsan ee ku dhibaataysan abaarahaasi. Waa waxa aynu wax isugu nahay ee aynu xasanaad iyo ajarba ka helayno. Waxaan leeyahay, haddii ay xukuumad iyo ganacsatoba tahay waa in si degdeg ah wax loola gaadhaa meelaha ay sida ba’an abaaruhu u saameeyeen”.
Dhinaca kale Siyaasi Cabdiqaadir Cali Obsiiye (Madaxweynaha Mustaqbalka) oo ka hadlayay xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo gaar ahaan is baddalka ku yimid xisbiga Mucaaridka ah ee WADDANI ayaa waxa uu yidhi sidan: “Labada Mansab ee Guddoomiye iyo Hogaamiye waxa aan ra’yigayga u arkaa uun laba mansab oo isku mid ah. Waayo Hogaamiye waa Qaa’id, Guddoomiyena waa Guddoon oo mid walbaa awooddiisa iyo saxeexiisa ayuu leeyahay. Waxaan qabaa in uu yahay geel laba baarqad lagu daray. Soomaaliduna waxa ay tidhi geel laba awr leh geel la’aan uun dheh. Sida ay isugu laynayaan uun buu midba qayb dareersadaa. Mana arko in wax badan ay ku kordhin karaan xaaladda siyaasadeed ee dalka. Uma arko wax kale oo aan ahayn baarqabaddii uu ku soo batay xisbigii oo u horseedi kara uun khilaaf. Saddexda xisbi ee maanta jira hore ayaan uga maahmaahoo Soomaalidu waxa ay odhan jirtay xeradayadu waa wada uloo ul la qaato ma leh. Anuu waxaan u arkaa saddexdii xisbi mid kaliya oo buuxin kara baahidii umaddu in aanu jirin. Innaguma cusba waa rag aan wada aragnay. Waddanku raggii hore uma baahna ee waxa uu u baahan yahay rag dhallinyaro ah oo dhiig cusub ah oo wadanka wax u qabta oo dardar qaba. Waxa waddanku u baahan yahay rag cusub oo dhallinyaro ah oo halka shacabku ku riyoonayo u shaqeeya oo u rumeeya.
Gabagabadii Siyaasi Cabdiqaadir Cali Obsiiye (Madaxweynaha Mustaqbalka) waxa uu farriin u diray Madaxweynaha Somaliland Md. Axmed Siilaanyo isaga oo ugu hambalyeeyey mudadii uu xilka madaxnimo hayay sida uu u shaqeeyey balse ugu baaqay in Madaxweynuhu furo dastuurka dalka oo la ogolaado in la helo tartamayaal ama musharrxiin Dhallinyaro ah oo madax bannaan oo dalka wax u qabta, lagana baxo saddexda xisbi ee kootada umadda ku haysta, waxaanu yidhi: “In badan ayaan runtii ku soo jiray ololahan waxaanan leeyahay Madaxweynaha iyo Golaha Baarlamanka oo aan ugu baaqayaa in dabarka laga furo musharraxnimada madax bannaan. Waxaan odhan lahaa xukuumaddani waa tii ugu wax qabadka badnayd ee soo marta waddanka oo wax badan bay soo qabatay oo aan la tiring karayn, waxaanse Madaxweynaaha leeyahay Madaxweyne Nimco waliba nusqaan leh wax qabadkaasi dhan ee aad soo qabatay haddii aan la helin cid halkii ka sii wadda dee nusqaab baa imanaysa” ayuu yidhi siyaasi Cabdiqaadir Cali Obsiiye (Madaxweynaha Mustaqbalka).
Previous PostDhalinyaro Cabasho Culus Ka Muujiyey Cadaalad Darro Lagu Duudsiyey Fursadaha Shaqo Ee Hay’adaha Somaliland Ka Hawl Gala Next Post“G/ Deegaanka Hargeysa Ma Yahay Mid U Qalma Maamulka Dawlada Hoose Mise Waa Ku Dulsaar…”Q:4aad